ဖုနျးအာမခံသကျတမျးမြားကို တိုးမွှငျ့ပေးလိုကျသညျ့ ဖုနျးကုမ်ပဏီမြား။ – SoShwe
Home/Tech/ဖုနျးအာမခံသကျတမျးမြားကို တိုးမွှငျ့ပေးလိုကျသညျ့ ဖုနျးကုမ်ပဏီမြား။
ဖုနျးအာမခံသကျတမျးမြားကို တိုးမွှငျ့ပေးလိုကျသညျ့ ဖုနျးကုမ်ပဏီမြား။
So Shwe April 21, 2020	Tech Leaveacomment
နာမညျကြျော Nokia ဖုနျးကုမ်ပဏီသညျ (၂၀၂၀) ခုနှဈ၊ မတျလ (၁၅) ရကျနမှေ့ မလေ (၁၅) ရကျနအေ့တှငျး အာမခံသကျတမျးကုနျဆုံးမညျ့ဖုနျးမြားကို နောကျထပျရကျပေါငျး (၆၀) အထိ အာမခံသကျတမျးတိုးမွှငျ့ပေးလိုကျကွောငျး သိရှိရပါတယျ။ အိန်ဒိယနိုငျငံတှငျး ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကူးစကျမှုနှုနျး မွငျ့မားလာခွငျးကွောငျ့ Lockdown ပွုလုပျထားရပွီး Nokia မတိုငျခငျက Samsung၊ Huawei၊ Realme၊ Motorola နဲ့ အခွားသောကုမ်ပဏီမြားသညျလညျး သူတို့ကုနျပစ်စညျးမြားရဲ့ အာမခံသကျတမျးမြားကို တိုးမွှငျ့ပေးထားပါတယျ။ Nokia က ယခုကဲ့သို့ အာမခံသကျတမျးတိုးမွှငျ့ပေးလိုကျသညျ့အထဲ၌ Feature ဖုနျးနဲ့ စမတျဖုနျးမြားပါဝငျသျောလညျး Nokia True Wireless Earbuds ပါဝငျဖှယျမရှိကွောငျး ယူဆရပါတယျ။
အိန်ဒိယနိုငျငံတှငျး E- commerce နဲ့ပတျသကျသညျ့ လမျးကွောငျးမြားကို ပွီးခဲ့သညျ့ ဧပွီလ (၂၀) ရကျနေ့၌ ပွနျလညျဖှငျ့လှဈရနျ စီစဉျထားပမေယျ့ အိန်ဒိယအစိုးရက သူတို့ရဲ့ဆုံးဖွတျခကျြကို ပွနျလညျပွငျဆငျကာ မလေ (၃) ရကျနမှေ့သာ ပွနျလညျဖှငျ့လှဈခှငျ့ပွုမညျဖွဈပါတယျ။ အိန်ဒိယနိုငျငံတှငျး လကျရှိအခြိနျအထိ ဖုနျးအသဈနဲ့ဆကျစပျပစ်စညျးမြား ရောငျးခရြေးလုပျငနျးမြားကဆြငျးနပွေီး ထိုကဲ့သို့ ဖွဈရသညျ့အကွောငျးရငျးကလညျး ပွညျသူမြားအနဖွေငျ့ လကျရှိအခြိနျ၌ ဖုနျးအသဈမဝယျနိုငျခွငျးကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။
Samsung ကလညျး အိန်ဒိယနိုငျငံအတှငျးရှိ သူတို့ကုနျပစ်စညျးအားလုံးရဲ့ အာမခံသကျတမျးမြားကို မလေ (၃၁) ရကျနအေ့ထိ တိုးမွှငျ့ပေးထားပွီး Lenovo နဲ့ Motorola အမှတျတံဆိပျဖုနျးမြားအားလုံးရဲ့ အာမခံသကျတမျးမြားကိုလညျး မလေ (၃၁) ရကျနအေ့ထိ တိုးမွှငျ့ပေးထားပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ Realme၊ Huawei နဲ့ Honor တို့သညျလညျး သူတို့ကုနျပစ်စညျးမြားရဲ့ အာမခံသကျတမျးမြားကို Lockdown ပွီးဆုံးသညျ့ အခြိနျကာလအထိ အကနျ့အသတျမရှိ ရှဆေို့ငျးပေးခဲ့ကွောငျး သိရှိရပါတယျ။
ဖုန်းအာမခံသက်တမ်းများကို တိုးမြှင့်ပေးလိုက်သည့် ဖုန်းကုမ္ပဏီများ။
နာမည်ကျော် Nokia ဖုန်းကုမ္ပဏီသည် (၂၀၂၀) ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၅) ရက်နေ့မှ မေလ (၁၅) ရက်နေ့အတွင်း အာမခံသက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်ဖုန်းများကို နောက်ထပ်ရက်ပေါင်း (၆၀) အထိ အာမခံသက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးလိုက်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုနှုန်း မြင့်မားလာခြင်းကြောင့် Lockdown ပြုလုပ်ထားရပြီး Nokia မတိုင်ခင်က Samsung၊ Huawei၊ Realme၊ Motorola နဲ့ အခြားသောကုမ္ပဏီများသည်လည်း သူတို့ကုန်ပစ္စည်းများရဲ့ အာမခံသက်တမ်းများကို တိုးမြှင့်ပေးထားပါတယ်။ Nokia က ယခုကဲ့သို့ အာမခံသက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးလိုက်သည့်အထဲ၌ Feature ဖုန်းနဲ့ စမတ်ဖုန်းများပါဝင်သော်လည်း Nokia True Wireless Earbuds ပါဝင်ဖွယ်မရှိကြောင်း ယူဆရပါတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်း E- commerce နဲ့ပတ်သက်သည့် လမ်းကြောင်းများကို ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီလ (၂၀) ရက်နေ့၌ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် စီစဉ်ထားပေမယ့် အိန္ဒိယအစိုးရက သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ကာ မေလ (၃) ရက်နေ့မှသာ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်း လက်ရှိအချိန်အထိ ဖုန်းအသစ်နဲ့ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ရောင်းချရေးလုပ်ငန်းများကျဆင်းနေပြီး ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်ရသည့်အကြောင်းရင်းကလည်း ပြည်သူများအနေဖြင့် လက်ရှိအချိန်၌ ဖုန်းအသစ်မဝယ်နိုင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
Samsung ကလည်း အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်းရှိ သူတို့ကုန်ပစ္စည်းအားလုံးရဲ့ အာမခံသက်တမ်းများကို မေလ (၃၁) ရက်နေ့အထိ တိုးမြှင့်ပေးထားပြီး Lenovo နဲ့ Motorola အမှတ်တံဆိပ်ဖုန်းများအားလုံးရဲ့ အာမခံသက်တမ်းများကိုလည်း မေလ (၃၁) ရက်နေ့အထိ တိုးမြှင့်ပေးထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Realme၊ Huawei နဲ့ Honor တို့သည်လည်း သူတို့ကုန်ပစ္စည်းများရဲ့ အာမခံသက်တမ်းများကို Lockdown ပြီးဆုံးသည့် အချိန်ကာလအထိ အကန့်အသတ်မရှိ ရွှေ့ဆိုင်းပေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
Previous တဈကမ်ဘာလုံးကပရိသတျမြားကို အားပေးစကားပွောကွားလိုကျသညျ့ မငျးသားကွီး Arnold
Next ??????????????????????????? ??????????????????????????????